Kroasia: Zo Ara-Pananahan’ny Vehivavy, Manomboka Ve Ny Fanisàna Ora? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Desambra 2014 3:52 GMT
Sary iray nozaraina be tety anaty tranonkala, hampahafantarana ny zo ara-pananahana ho toy ny zon'olombelona.
Tato ho ato dia lohahevitra nampiasa loha tao Kroasia ny zo ara-pananahan'ny vehivavy. Hetsi-panoherana iray nokarakarain'ny tamin'ny 28 Novambra tao Zagreb, Kroasia no nanambaràna fa “Fanalàn-jaza tsy ara-dalàna – tsy hiverin-dàlana isika”, ary tamin'ny 11 Desambra dia nisy fivoriana niarahan'ny Kaomity Ho Amin'ny Fitoviana Lenta sy ny CESI (Foibe Fanabeazana, Fanoroana Làlana ary Fikarohana) natao nandinihana ny zo ara-pananahana ao Kroasia.
Niseho ireo tranga roa ireo taorian'ny nanombohan'ireo fampahalalam-baovao nametraka fanontaniana mikasika io lohahevitra io, nateraky ny vavahadin-tserasera mahaleotenan'ireo mpikatroka mafàna fo, toy ny Libela.org (izay hany vavahadin-tserasera ao Kroasia manoratra tsy tapaka mikasika ny zo ara-pananahana) ary ny fikarohana natao sy navoakan'ny CESI — “Faritra manjavozavo – ny resaka fanalàn-jaza aty amin'ny Repoblikan'i Kroasia”. Ao Kroasia, hatramin'ny herinandro fahafolo itondrany vohoka dia afaka manàla zaza tsy asiam-panontaniana ireo vehivavy, nanomboka tamin'ny 1978, noho ny lalàna iray napetraka fony i Kroasia mbola nitambatra tamin'i Yôgôslavia izay mbola manan-kery hatramin'izao.
Nandritry ny 23 taona lasa, hatramin'ny nahazoan'i Kroasia fahaleovantena, marobe ireo vondrona ara-pinoana sy mpitahiry ny nentin-drazana amin'ny endriny vaovao no nanandrana nanohitra ny lalàna tahàka izany ary nanakana ny fanalàn-jaza amporisihan'ny lalàna. Tsy nisy na iray aza tamin'izy ireny, hatramin'izao fotoana izao, no mba niezaka nanao tsindry tamin'ireo mpanao lalàna mba ho fomba tena handraràna tanteraka ny fanalàn-jaza, na dia maro tamin'izy ireny aza no nikarakara hetsi-panoherana sy nanao fanentanana mandà ny fahafahana misafidy malalaka, toy ny “andro 40 ho an'ny aina”. Tsy nisy na iray aza tamin'ireo fikambanana nifamory nanohitra ny zon'ny vehivavy ireo mba niresaka momba ireo kasinga toy ny fandrindràm-piterahana, fanabeazana ary ny sosialy sy toekarena tafiditra amin'ny taha sy fomba fanao amin'ny fanalàn-jaza.
Tsy nisy fampianarana tafiditra anaty fandaharana any an-tsekoly, ary ireo vondrona izay “mandàla ny aina” dia manohitra ny hampidirana fanabeazana mikasika io resaka io sy ny fanapariahana ny fahalalàna fototra momba ny zo ara-pananahana sy ny fandrindràm-piterahana manerana ny firenena. Tsy manao afa-tsy ny mampitombo ny hevitra raiki-tampisaka sy ny henatra omena ireo vehivavy izay nanapa-kevitra ny hanàla zaza.
Loza mitatao iray goavana ho an'ny zo ara-pananahana ho an'ny vehivavy ao Kroasia ny feon'ny fieritreretana, izay ahafahan'ireo “gynecologists” misafidy ny tsy hanatanteraka fanalàn-jaza, ary ny “amniocentesis” tsy hanome fandrindràm-piterahana, na ny sàsany amin'ireo endrika fanampiana amin'ny fitondràna vohoka araha-maso ara-medikaly. Raha tsy mifanaraka amin'ny fomba nitaizàna azy ara-maoraly ireo dingana arahana momba ny fahasalamàna ara-pananahan'ny vehivavy, dia azony atao ny mandà tsy hanatanteraka azy ireny.
Ireo mpomba ny fahafahana misafidy, nifamory tao Zagreb tamin'ny 28 Novambra 2014, nitondra sorabaventy hoe : “Tsy hiverina amin'ny fanalàn-jaza tsy ara-dalàna isika”. Sary an'ny Center for Civic Courage, fampiasàna nahazoana alàlana.
Raha raisina ny maha hazo amoron-tevana ny rafitra ara-pahasalamana Kroaty, noho ireo rafitra efa lany andro sy ny fanavaozana vaovao, ary noho ny toekarena tsy marin-toerana, dia marobe ireo vehivavy no tsy manana fahafahana ara-bola hangataka fitsaboana ara-pahasalamana any amin'ireo toeram-pitsaboana tsy miankina tiany. Namorona toe-javatra iray tsy ahafahan'ireo vehivavy misafidy tsotra izao handray fanapahankevitra momba ny tenan'izy ireo manokana izany.
Satria tsy ao anaty fandaharanasa ara-pahasalamana ao amin'ny firenena ny fanalàn-jaza antsitrapo, amin'ny ankapobeny ny sarany dia manodidina ny 100 euros hatramin'ny 400 euros (eo amin'ny 124 hatramin'ny 500 dolara amerikana). Amin'ny tranga sasany, tonga hatrany amin'ny fanapahankevitra tsy hapiditra ny resaka fanalàn-jaza ao amin'ny toeram-pitsaboany ny mpitantana ny hôpitaly sasany, izay fanitsakitsahana mivantana ny lalàna misy, saingy avelan'ireo manampahefana hisosa fotsiny eny ny fanapahan-kevitra tahàka izany.
Tsy ela akory, nitondra fanatsaràna vitsivitsy sy fepetra natao ho arahana ny Ministeran'ny Fahasalamana, izay mampiditra ny fampiatoana an-tsitrapo ny fitondràna vohoka ho ao anatin'ny tolotra fikarakarana ara-pitsaboana any amin'ny hôpitaly tsirairay manana sampana misahana ny resaka fiterahana. Na izany aza, raha miezaka mamorona fahafahana miditra amin'ny fanalàn-jaza ara-dalàna, dia io minisitra io ihany no nanome alàlana ny Sv. Duh avy ao Zagreb ho afaka tsy hanaraka izany fepetra izany. Na dia firenena laika aza i Kroasia, mbola manana dindo betsaka amin'ny famoronana ny lalàna sy fanefena ny fomba fijery ao aminy ny fiangonana Katôlika ao Kroasia.
Tamin'ny taona lasa, 3.816 ny fanalàn-jaza an-tsitrapo natao tany Kroasia, izay nanatombo 35% monja tamin'ny fanalàn-jaza rehetra tamin'ny 2013 tao amin'ny firenena. Ny 65% sasany indray dia nilaina natao noho ny antony ara-pahasalamana nateraky ny tsy fahatomombanana na antony hafa. Tsy maneho ny sary tena izy ireo antontanisa ireo, satria ireo mpikatroka mafàna fo mpomba ny fahafahana misafidy malalaka ao Kroasia dia nanamarika fa ny sàsany tamin'ireo fanalàn-jaza dia natao tany ivelan'ny toeram-pitsaboana manana ny fitaovana ilaina hanatanterahana izany, ary ny dingana sasantsasany dia lasa noraketina anaty fepetra ara-pahasalamana hafa.
Na dia nanome “fahafahana mampiasa aterineto haingam-pandeha” 1 Mb/s aza ny governemanta Kroaty” tamin'ny 2014, lazaina fa hanome fahafahana miditra bebe kokoa sy fahalalahana mahazo vaovao, mbola miatrika harin-karena faobe ambany dia ambany i Kroasia, taha ambony amin'ny tsy fananana asa, ny fitomboana tsy mitsahatry ny fironana nasionalista, ahitàna ny dindo tafahoatran'ny ara-pinoana eny anatin'ny raharaham-piarahamonina sy ny raharaham-panjakàna, ary ny fihemorana raha ny zo ara-pananahan'ny vehivavy sy ny olana ara-pahasalamana no resahana.